Tun Tun's Photo Diary: Cameron Highland, Malaysia #2 (Mossy forest)
Hotel Equatorial can be seen from the tower.
ခုနက တက်ခဲ့တဲ့ Tower ပုံပါ။ မလေးရှားမှာ Police ကို မလေးလို POLIS လို.စာလုံး ပေါင်းပါတယ်။ Motorcycle ကို လဲ Motosikal လို.ပေါင်းတယ်။ အင်္ဂလိပ် စာကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ စာလုံးတွေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီ Tower တိုင်ရှိတဲ့နေ၇ာက ထွက်လာပြီးတော့ နောက် လိုက်ပို.ပေးတဲ့ နေ၇ာကတော့ Mossy Forest ဆိုတဲ့ နေ၇ာဖြစ်ပါတယ်။ နားလည်အောင် ပြော၇မယ်ဆို၇င် အင်မတန် စိမ်းလန်းစိုပြေ တဲ့ သစ်တော လို.ပဲ ပြော၇မယ်။ တောထဲကို မ၀င်ခင် ကျွန်တော်တို.ကို ကားဆ၇ာက ကားပေါ်ကပါလာတဲ့ေ၇နဲ. မုန်.တွေ ကျွေးပါတယ်။ မုန်.စား၇င်းသူက ဒီ တော ၇ဲ. သမိုင်းကြောင်းနဲ. တောထဲမှာ ဘာအပင်တွေ ရှိတယ် ဆိုတာ ၇ှင်းပြပါတယ်။ တောထဲမှာ နွံ.တွေ ၇ှိလို. Walking shoe မစီးပဲ slipper စီးထားတဲ့ သူတွေ ဆို အခက်အခဲရှိနိုင်ကြောင်း သတိပေးပါတယ်။
တောထဲက သစ်ပင်တွေ ပေါ်မှာေ၇ညှိလို အပင်တွေ တွယ်ကပ် ပေါက်နေပြီးေ၇ဓါတ်တွေ ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ လက်နဲ. ဖိညှစ်လိုက်၇င်ေ၇တွေထွက်လာပါတယ်။ ဒီနေ၇ာမှာဆို၇င် တောင်ကျေ၇ကိုေ၇သန်.ဗူးနဲ. ခံထားပါတယ်။ ခဏနေ တောထဲက ထွက်လာ၇င် လက်ဆေး ခြေဆေး လို.၇တာပေါ့။ေ၇က အေးစက်နေတာပဲ။
ကားဆ၇ာက ရှေ.ကသွားပြီးကျွန်တော်တို.နောက် ကလိုက်ပါတယ်။ တောထဲကို တပတ်ပတ် ကြည့်တဲ့ သဘောပါ။ Slipper စီးတဲ့ သူတချို.ကားပေါ်မှာ နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ တသက်လုံး Slipper စီးလာတော့ ဒါမျိုးလောက်ကတော့ အပျော့ပဲ။ တချို.နေ၇ာမှာ ရွံ.တွေ ထူတော့ ဖိနပ် ကျွံမသွားအောင် မြေမာတဲ့နေ၇ာ ၊ သစ်ပင် အမြစ်တွေ ရှိတဲ့ နေ၇ာ တွေကိုေ၇ွးပြီး လျှောက်ပါတယ်။ တချို.နေ၇ာတွေလဲ သစ်ကိုင်းတွေ နွယ်ပင်တွေ ဆွဲပြီး တက်၇ ဆင်း၇ပါတယ်။
တောထဲမှာ အ၇မ်းကို တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းနေပြီး စိတ်ကူးမိတာက အင်္ဂလိပ် မှော်ကားတွေ ၊ ရာဇ၀င်ကားတွေ ထဲက ရူခင်းတွေ နဲ.သွားပြီးတူပါတယ်။ တစ်ယောက်ထဲ လာ၇င်တော့ ခြောက်ခြားစ၇ာ ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ :)
တောထဲမှာ မိနစ် ၂၀ နာရီဝက် လောက် လမ်းလျှောက်ပြီး ကား၇ပ်ထားတဲ့နေ၇ာကို ပြန်ေ၇ာက်ပါတယ်။ တော၇ဲ. ၇ူခင်းနဲ. အငွေ.အသက်တွေက တော်တော်ကို သာယာလို. ခုန လမ်းဝင်မလျှောက်ပဲ ကားပေါ်မှာ စောင့်နေတဲ့ သူတွေကို ကြည့်ပြီး သနားမိတယ်။း) ဒီလို စိမ်းလမ်းစိုပြေတဲ့ တောကို ဒါ ပထမဆုံး တခါ မြင်ဘူးတာပါ။
တောင်ပေါ်မှာ ဒီလို ဂျစ်ကားတွေ အများကြီးပဲ။ ကျွန်တော်က စီးတဲ့ ကားကတော့ ပုံမှန် aircon tour bus ပါ။
Mossy Forest အပြီးမှာတော့ ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ Half day tour ရဲ. နောက်ဆုံးခရီးစဉ်ဖြစ်တဲ့ BOH လက်ဖက်စိုက်ခင်းနဲ. စက်ရုံကို လိုက်ပို.ပါတယ်။ ခရီးစဉ်တခုလုံး၇ဲ အဓိက နေ၇ာ လို. ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို. ကျွန်တော်လဲ အ၇မ်းကို စိတ်လူပ်၇ှားမိပါတယ်။ လမ်းတလျှောက်မှာလဲ လက်ဖက် စိုက်ခင်းတွေ ချည်းပါပဲ။
စက်ရုံဝန်ထမ်းတွေ နဲ. သူတို.မိသားစု တွေ နေတဲ့ အိမ်ယာ တွေပါ။ တော်တော်လေးကို အေးချမ်းပါတယ်။ ကစားကွင်းတောင် ၇ှိလိုက်သေးတယ်။ အစိမ်းေ၇ာင် တောင်တန်းတွေ ၀န်းရံထားတဲ့ ရူခင်းတွေအတူ နေ.စဉ် နိုးထ၇၇င် အ၇မ်းကို လန်းဆန်းပြီး စိတ်ကြည်လင် မှာပဲလို. တွေးမိတယ်။
နောက်ပို.စ် မှာ BOH Tea plantation နဲ. factory ဓါတ်ပုံတွေ အများကြီး တင်ပါ့မယ်။ ဒီ၇က်ပိုင်း အလုပ် နည်းနည်းများ လို. တပတ် ကို ပို.စ် တခုလောက်ပဲ တင်နိုင်ပါတယ်။ စောင့်ပြီး ဖတ်ပေးကြပါဦး။ comment တွေလဲ ချန်ခဲ့ကျပါဦး။း)
at 5/23/2014 09:21:00 AM
၀ိုးးးးးး သိပ်လှတာပဲ စိမ်းလန်းတဲ့တောတောင်တွေကို ကြည့်ရတာနဲ့တင် ကိုယ်ပါ စိတ်အေးချမ်းသွားတာပဲ
ကျေးဇူးပါ ဘရာသားရေ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက် :))))))
ko9May 26, 2014 at 12:51 AM
ရှုခင်းတွေကလဲ လှ...ရိုက်တတ်တဲ့ သူကလဲ ကျွမ်း တော့ ပုံလေးတွေ က လှ မှ လှ ဝေး။ :)
I am going tour with you. Please keep on going.